भारतीय क्वारेन्टाइनमा नेपाली, कस्तो छ अवस्था ? - Birgunj Sanjalभारतीय क्वारेन्टाइनमा नेपाली, कस्तो छ अवस्था ? - Birgunj Sanjalभारतीय क्वारेन्टाइनमा नेपाली, कस्तो छ अवस्था ? - Birgunj Sanjal
भारतीय क्वारेन्टाइनमा नेपाली, कस्तो छ अवस्था ?
२३ चैत्र २०७६, आईतवार १२:३१
काठमाडौं | चीनबाट शुरुभई विश्वभर फैलिएको कोरोनाको चपेटमा दक्षिण एसिया पनि परेपछि नेपाल र भारत दुवै देशहरू लकडाउन गर्न बाध्य भएका छन् ।
लकडाउनको प्राथमिक असर दुवैतिर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरूमाथि परेको छ । त्यसकारण दुवै देशका मजदूरहरू आ–आफ्ना घर फर्किन चाहिरहेका छन् । तर नेपाल सरकारले सिमा नाकाहरू बन्द गरेपछि कतिपय मजदूरहरू घर फर्किन सकेका छैनन् ।
नेपालमा कार्यरत भारतीय मजदूरहरू नेपालतिरै फसेका छन् भने भारतमा कार्यरत मजदुरहरू भारत तर्फै फसेका छन् । यस्तो अवस्थामा मजदूरहरूको राहतको लागि नेपाल र भारतबीच आपसी सल्लाहमा एकअर्काको नागरिकको खाने बस्ने र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गर्ने सहमति भयो ।
यो सहमति पालना गर्न दुवै देशको लागि खासै गाह्रो पनि छैन । किन कि नेपाल र भारतबीच कुटनीतीक सम्बन्ध मात्र नभई जनस्तरको सम्बन्ध पनि छ । कुटनीतिले आफ्नो कार्य गरिरहँदा दुवै देशका स्नानीय अधिकारी र स्वास्थकर्मीहरूले पनि एक अर्काको सहयोगमा अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
महाकाली पारि भारतका धार्चुला, पिढौरागढ र दिदिहाट जिल्लाहरूमा बनाइएको १० वटा क्याम्पमा १२ सय ७३ जना नेपाली मजदुर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई भारत सरकारले राम्रो खाना र बासको व्यवस्था गर्नुको साथै काउन्सिलीङको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
समय समयमा उनीहरूको स्थास्थ्य परीक्षण पनि गरिदैंछ । धार्चुलाको एक क्याम्पमा बसिरहेका गोविन्द धामी भारत सरकारको प्रबन्धबाट खुसी छन् । उनले त्यहाँको कम्यापमा राम्रो खाने बस्ने व्यवस्था गरिएका बताए ।
परिवारभन्दा टाढा बस्नुपरेको दुःख र सिमानाका कहिँले खुल्ला भने पर्खाइको बीच भारत सरकारले हाम्रो लागि सुविधासम्पन्न क्याम्पको व्यवस्था गरिदिँदा आफुहरुलाई खुसी धामीले बताए ।
र्धाचुलास्थित क्याम्पहरू नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको र कोरोनाबाट बच्ने उचित परामर्शको साथै उनीहरूलाई काउन्सिंलिङ पनि गर्ने गरिएको क्याम्पमा अहोरात्र खटिरहेका एक अधिकारीले बताए ।